Afrika, 29 July 2019
Isniin 29 July 2019
Militariga Sudan iyo Rayidka oo Heshiis Gaaray
Golaha ku meel gaarka ee haya xukunka dalka Sudan iyo Isbaheysiga kooxaha mucaaradka ayaa arbacadii shalay Khartoum si rasmi ah ugu kala saxiixday heshiis awood qeysi ah.
Muddaaharadayaasha iyo Jeneraallada Sudan oo Heshiis Gaaray
Muddaharaadayaasha Sudan iyo Jeneraallada maamula dalkaaasi ayaa Arbacada maanta qalinka ku duugey heshiis dhigaya in la sameeyo maamul rayid ah, kaas oo ay dalbanayeen dibad-bax sameeyayaasha tan iyo markii xilka laga tuurey madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir 3 bil ka hor.
Maxkamadda ICC oo Danbi ku Heshay Ntaganda
Maxkamadda Caalamiga ah ee Danbiyada ee loo soo gaabiyo ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada dalka Congo, Bosco Ntaganda ku heshay dhamaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray danbiyo dagaal iyo danbiyo ka dhan ah aadanaha.
Africa oo Yeelaneysa Soon Ganacsi oo Xor ah
Madaxda Africa ayaa maanta ku kulansan magaalada Niamey ee caasimadda dalka Niger, si ay ugu dhawaaqaan zoon ganacsi oo xor ah oo ka wada dhaxeeya dhamaan qaaradda Africa.
Sudan: Wada-hadallada Sudan oo horumar laga sameeyay
Dalka Sudan waxaa xoogaa horumar ah laga sameeyay wada hadallo muddo dheer socday oo ay ku lug lahaayeen ururada gobolka iyo ergay caalami ah, si looga gudbo ismari waa ka dhex taagnaa militariga iyo xoogagga kacdoonka.